असारमा मिथिला शर्माको कोर्ट म्यारिज हुने | News Filmy
असारमा मिथिला शर्माको कोर्ट म्यारिज हुने
भन्छिन् : 'साधारण कोर्ट म्यारिज गर्छु, कुल पूजा गर्छु, आफूभन्दा अग्रजको आशीर्वाद लिन्छु'
‘मलाई जीवनमा धेरैबाट विवाह, प्रेम प्रस्ताव आयो, तर सबैको प्रस्तावलाई उहाँको प्रस्तावले जित्यो।’ –५१ वर्षको उमेरसम्म अविवाहित रही अब भने पूर्व आईजीपी मोतीलाल बोहरासँग बिहे गर्ने तयारीमा रहेकी अभिनेत्री मिथिला शर्माले नेपाल भनिन्। बिहेको साइतचाहिँ कहिलेलाई जुर्यो त भन्ने प्रश्न भुइँमा खस्न नपाउँदै अभिनेत्री मिथिलाले औंला भाँच्न थालिन्– ‘यही सालको जेठ–असारभित्रमा भइसक्छ।’
हिजो मिथिलाले मान्ने र सम्मान गर्ने पूर्व आईजीपी मोतीलाल बोहोरा, आज उनको जीवनमा पति बन्दै छन्। ६५ वर्षीय मोतीलाल र मिथिलाले अब एक अर्काप्रति समर्पित हुँदै खुसीसाथ जीवनका खुट्किला पार गर्ने निधो गरिसकेका छन्। सबैलाई लाग्दो हो, आखिर यो उमेरमा आएर किन विवाह गर्नुपर्यो? मिथिलाले भने फरक तर्क सुनाइन्– ‘वास्तविक जीवनमा साथी चाहिने भनेको यही एज हो। यो उमेरमा मानिससँग अरू कोही हुँदैन। उमेर हुँदासम्म त सबैको हात पाखुरा हुन्छन्, सबै काम गर्न सक्छन्। सहारा भनेको त लेस एजमा आवश्यकता पर्दछ।’
मोतीलालसँग मिथिलाको चिनजान भएको करिब ३० वर्षभन्दा बढी भइसकेछ। त्यतिबेला मोतीलाल प्रहरी इन्सपेक्टर थिए, मिथिला महेन्द्र पुलिस क्लबको कलाकार। त्यसै बेलादेखि नै मिथिलाले मोतीलाललाई आदर्श पुरुषको रूपमा सम्मान गर्ने रहिछिन्। मिथिलाले भनिन्– ‘कार्यक्रममा हाम्रो धेरै पटक भेट भइरहन्थ्यो। हाम्रो एक अर्काबीच म्याचुअर्ड व्यवहार हुन्थ्यो। उहाँ सिम्पल, इन्टिलिजेन्स, डिप्लोम्याटिक हुनुहुन्थ्यो। फेरि उहाँले मलाई चिन्दै नचिनेको पनि होइन। उहाँलाई मेरो सबै कुरा थाहा छ। मेरो पारिवारिक अवस्थादेखि म बालबालिकाहरूसँग रमाउँछु, कलाक्षेत्रमै रहन्छु भन्नेसम्म थाहा छ। उहाँले पनि मलाई फरक रूपले हेर्नुभएको जस्तो लाग्थ्यो।’
मिथिलाले जीवनको उत्तराद्र्धमा आएर मोतीलालसँग जीवन बिताऊँ भनेर कल्पना पनि गरेकी थिइनिन् रे। अकास्मात् अहिले आएर मोतीलालले मिथिलालाई प्रस्ताव राखेछन्– ‘के अबको जीवनमा तिमीले मलाई साथ दिन सक्छौ?’ यो प्रश्नले मिथिला एकैपटक गम्भीर र आश्चार्य भइछिन्। मिथिला त्यो क्षण स्मरण गर्छिन्– ‘यो प्रश्नले मलाई धेरै सोचमग्न बनायो। म जीवनमा कुनै पनि निर्णय लिँदा त्यति लामो समय लगाउँदिनँ, यस वा नो भनिहाल्छु। यस्तो प्रस्ताव आएपछि भने मैले आफूले आफूलाई नै धेरैपटक प्रश्न गरें। हल्का रूपमा लिनु पनि भएन।
समाजमा सानो कुराले पनि ठूलो हावा चल्छ। परिवार, आफन्त, शुभचिन्तकहरूसँग सल्लाह गरें। अरूले पनि जीवन एक्लै बाँच्न गाह्रो छ, राम्रो साथी पाएको बेला विवाह गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर सल्लाह दिनुभयो। मलाई पनि उहाँ एक्लै होइसिन्छ, एक अर्कालाई साथ दिएर अगाडि बढौं भन्ने भयो। अनि एक डेढ महिनापछि मात्र मैले जवाफ दिएँ। मलाई जीवनमा डिसिजन गर्नका लागि लामो समय लागेको भनेकै यही हो।’ मोतीलालले पत्नी बितेको एक वर्षपछि मिथिलालाई विवाहको प्रस्ताव राखेका थिए। मोतीलाल एक्लो भएकाले पनि मिथिला उनीसँग वैवाहिक जीवनमा बाँधिन तयार भएकी हुन्। ‘जीवनको यथार्थलाई उहाँले धेरै राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ। जीवन भनेको जहाँबाट शुरू गर्यो त्यहींबाट शुरू हुन्छ।’ –मिथिला भन्छिन्।
मिथिलाले यो विवाहलाई विवाहभन्दा पनि जीवनसाथीका रूपमा बुझेकी रहिछन्। ‘विवाह भनेको एउटा पारिवारिक जीवन साथी हो। हामीले एकअर्कालाई दुःख–सुखमा बाँध्न सकिने जीवनसाथीका रूपमा लिएका छौं। मैले उहाँसँग दुःख–सुख सेयर गर्न सकूँ, चाहेको बेलामा चाहेको आवश्यकताहरू उहाँसँगसँगै पूरा गर्न सकूँ।’ –उनी भन्छिन्। अहिले आएर यस्तो निर्णयमा पुगेकी मिथिलाले जीवनमा कहिल्यै पनि विवाहबारे सोचेकी रहिनछिन्। जीवन आफ्नै ढंगले जिउनुपर्छ भन्ने उनलाई लाग्थ्यो रे। ‘यो हामीबीचको एउटा राम्रो अन्डरस्टइन्डिङ हो। मेरो विवाहमा त्यस्तो तामझाम केही पनि हुँदैन। साधारण कोर्ट म्यारिज गर्छु। कुल पूजा गर्छु। आफूभन्दा अग्रजको आशीर्वाद लिन्छु।’ –मिथिलाले विवाह योजनाबारे पनि प्रस्टइइन्। आफ्नो विवाहपछि पनि कलाक्षेत्रमै रहने तथा सबै काम सुचारु रूपले चल्ने र जिम्मेवारीमा कुनै कमी नहुने मिथिलाको भनाइ छ।
मिथिला जेठ वा असारमै कोर्ट म्यारिज गर्ने योजनामा छिन्। खासमा उनी आलोक नेम्वाङको निर्देशनमा निर्माणाधीन फिल्म ‘अझै’ पनिमा काम गर्दै छिन्। यही फिल्मको काम सकाएपछि मात्र विवाह बन्धनमा बाँधिने सोचले उनले बिहे योजनालाई जेठ वा असारमा पुर्याएकी हुन्। ‘बिहेपछि पनि कलाक्षेत्रमै काम गर्छु। तर बिहेअगाडि हातमा लिएको काम सकाऊँ भनेर जेठ वा असारमा कोर्ट म्यारिज गर्ने योजना बनाएको हुँ।’ –मिथिलाले प्रस्ट पारिन्।
साभार : नेपाल समाचार पत्र
One thought on “असारमा मिथिला शर्माको कोर्ट म्यारिज हुने”
yo kura sunda didi bhanda ma dherainai khusi bhaye kinaki jiwan sathi bhaneko banayera hudaina rahexa banera audo rahexa, tara katibela ra kaha bhet hunxa thahai hudaina rahexa . j hosh dd hajurko dampatya jiwanko hardik hardik mangal maya subhakamana, ani mero jiwanama pauney khe khusiharupani hajurlai maitiko taraff bata. hamile sangai kaam ta garenau tara ma hajurko nritya dekherera , herera nai ma pani yo stagema aaipugeko xu, feri pani subhakamana hai didi ani bhenaju lai darshan . sadiaba yo jodi khusi saath aghi baduna.
विरामी छोरी र आमाको गीत लिएर आए मिथिला र सुरक्षा
मिथिलाले गरिन कोर्ट म्यारिज (फोटो फिचर सहित)